Tsy ekena, hoy ny Seces sady tsy rariny ny fanaovana ho ambin-javatra ny tontolon’ny fampianarana ambony sy ny fampianarana siantifika. Anisan’izany ny tsy fanatanterahana araka ny tokony ho izy ny lalàna velona laharana 1995-023 tamin’ny 6 septambra 1995 sy ny laharana 2003-008 tamin’ny 5 septambra 2003 ary ny “note d’audience n°105 PM/CAB du 29 avril 2019”, izay vahaolana natolotry ny praiminisitra sady lehiben’ny governemanta. Tsongaina amin’ireo ny tsy fandefasana ny antontan-taratasin’ireo mangataka ny “maintien en activité” araka ny andininy faha 61 ao amin’ny lalàna voalaza teo, ny tsy fandoavana ny “indemnité de recherché et d’investigation-Exercices 2016, 2018” ho an’ireo mpikaroka misotro ronono sy ny sisa ary indrindra ny endrika fanapotehana mivantana na an-kolaka ny tontolon’ny oniversite miankina amin’ny fanjakana sy ireo foibem-pikarohana nasionaly rehetra ao anatin’ny fampiharana ny rafitra LMD. Nanamafy ny Seces omaly fa mitohy ny fampiatoana ny fampianarana sy fikarohana ataon’izy ireo. Nangataka ny filoham-pirenena ihany koa izy ireo mba hahay hifantina ireo tomponandraikitra asaina misahana ny olana eny amin’ny anjerimanontolo. Mba izay tena mahalala ny olan’ny oniversite, hoy ny fanambarana, no aoka omena toerana. Nilaza koa moa iny omaly iny ny solontenan’ny oniversiten’i Toliara fa hanatevin-daharana ny hetsika.